JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa – Beekan Guluma Erena
JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa	Beekan Guluma Erena
JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa. Yeroon ammaa kun yeroo barbaachiftuufi murteessituu sabni keenyaa irree tokkoon gadi ba’uu qabu waan ta’eef hafuurri garaagarummaa caccabuu qaba!
← JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN. Baga gammaddan Oromoo. Ammallee warra biyya keessa jiranis…
GAMMACHUU LAKKUU…Jaarmiyaaleen Oromoo walitti dacha’an →